अष्ट्रेलिया विशेषः रिजनल भिसा पाइँदैन ?
अचेल धेरैजना आइएल्ट्स दिन छाडेर पीटीईतर्फ लागेका छन् । के यो परीक्षा आइएल्ट्सभन्दा सजिलो हुने हो र?
त्यसरी सजिलो नै भन्न त मिल्दैन । तर हाम्रा कतिपय ग्राहकहरू जसले आइएल्ट्समा कहिले पनि चाहिने स्कोर ल्याउन सकेका थिएनन्, तिनले पीटीईबाट भने चाहिने स्कोर ल्याएको हामीले पाएका छौँ । त्यसो भन्दै गर्दा हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि आइएल्ट्समा चाहिने स्कोर ल्याउन नसकेर पीटीईतर्फ लागेकाहरूले पीटीईमा पनि असफलता पाएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । यदि तपाईंले कहिले पनि पीटीई दिनुभएको छैन भने त्यो पनि कोशिस गरी हेर्नु भने राम्रै हुन्छ । के थाहा, तपाईंलाई पीटीईको फर्म्याट सजिलो पो लाग्छ कि !
पीटीईलाई छिट्टै नै इमिग्रेशनले मान्यता दिन छाड्दैछ रे भन्ने हल्ला छ नि?
मैले त्यसबारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक निकायबाट केही पनि सुनेको छैन ।
म गएको आठ महिनादेखि अकाउन्टिङमा रिजनल भिसा खुल्ला भन्ने आशा गरेर बसेको छु । जुलाईबाट फेरि रिजनल भिसा खुल्छ भन्ने सुनेको थिएँ । तर अझैसम्म खुलेको छैन । यसबारेमा केही अपडेट छ?
हालसम्म त्यस्तो अपडेट खासै केही पनि छैन । तर निकट भविष्यमा अकाउन्टिङका लागि रिजनल भिसा खुल्न सक्ने सम्भावना भने छ ।
मैले गएको मार्च महिनामा मास्टर्स डिग्री सिध्याएँ । गत अप्रिलमा टीआर पनि हालिसकेको छु । तर मेरो स्टुडेन्ट भिसा अक्टोबर २०१६ मा मात्र सकिन्छ । मेरा केही साथीहरूले बताएअनुसार मैले अक्टोबर महिनासम्म मैले अंग्रेजी वा अरू कुनै कोर्समा भर्ना गरेर पढिरहनुपर्छ । के यो कुरा साँचो हो? यदि हो भने मैले अक्टोबरभन्दा पहिले फुल टाइम काम गर्न पाउँछु कि पाउँदिन?
तपाईंले अंग्रेजी वा अरू विषयमा भर्ना गरेर पढिरहनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । तपाईंले जुन तह पढ्नको निम्ति विद्यार्थी भिसा पाउनुभएको थियो, त्यो विषय सिध्याइसक्नु भएको छ । कामको सन्दर्भमा पनि तपाईंलाई फुल टाइम काम गर्न कुनै समस्या छैन । तर तपाईंले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने टीआरको लागि आवेदन दिएको कारणले तपाईंले जुन ‘ब्रिजिङ भिषा ए’ पाउनुभएको छ, त्यो भने अक्टोबर महिनामा तपाईंको विद्यार्थी भिसा सकिएपछि मात्र लागू हुन्छ । त्यतिञ्जेलसम्म तपाईं कानुनी हिसावले विद्यार्थी भिसामा नै रहनुहुन्छ ।